Inyanga yesithathu yentuthuko yengane
Yiqiniso, umntwana oneminyaka emibili ubudala useyingane encane kakhulu. Uma uvakashelwe abangane nezihlobo, cishe cishe abazi ukuthi benzeni nengane. Njengomthetho, isithakazelo sabanye abantu siboniswa kumuntu omdala omdala, izingane ezisebenzayo. Kuwe, i-carapace encane iyizwe lonke, ubona zonke izinguquko ekuthuthukiseni kwayo. Inyanga yesithathu yokuthuthukiswa kwengane yisinyathelo esilandelayo sokuthola okusha nokufezekisa.
Yiziphi izinguquko ezenzeka ngenyanga yesithathu yentuthuko yengane? Ingane yakhula kanjani, yifunde ini, yini ezoyifunda phakathi nenyanga yamanje yokuphila? Ake sikhulume ngalokhu kulesi sihloko.
Ukuphumelela okukhulu nokuncane kwengane enyangeni yesithathu yokuphila
Njengoba wazi, izinsana zonyaka wokuqala wokuphila zikhula ngokushesha, futhi ngokushesha zikhula ezinyangeni ezintathu zokuqala zokuphila. Ngakho-ke, ngenyanga yesithathu isisindo somntwana sanda ngokwesilinganiso ngamagremu angu-800, ukuphakama ngamamentimitha amathathu, ukuphakama kwekhanda ngo-1 cm, nesibindi sesifuba esingaphezu kwesentimitha.
Ukuthuthukiswa kwamakhono we-sensory-motor
Ekupheleni kwenyanga yesithathu yentuthuko yayo ingane isazi kakade ukuthi:
Jikelezisa ikhanda ekubhekeleni umsindo othakazelisayo noma omusha;
uzama ukuhlala phansi lapho bemthatha ngezandla;
uzama ukuhlala emagcekeni akhe lapho elala ngesisu sakhe;
Isundu somntwana sivuliwe, okungukuthi, asisekho emgqeni, njengasezinyangeni ezedlule;
i-kid ingalandela into ehamba kancane;
ingane ibonisa isifiso sokuthatha ithoyizi;
endaweni "elele emanzini", ingane ikwazi ukubamba ikhanda cishe imizuzwana engu-10-15;
Uma umntwana ekhuphuka, khona-ke angakwazi ukubamba ikhanda nophuzo.
Ukuthuthukiswa komphakathi kwengane
Ngokuphathelene nentuthuko yezenhlalakahle, umntwana uyakwazi:
funda amalungu emikhaya yawo;
ngenjabulo ukumomotheka esimweni esimnandi;
ukuheha ukunakwa kwamalungu omndeni omdala;
ukuphendula ngenkuthalo ukuba khona kwamalungu omndeni othandekayo - umama nobaba.
Ukuthuthukiswa kwamakhono angqondo
Kanye nokuthuthukiswa okusebenzayo kobuchopho, amakhono omntwana wengqondo ahlakulela. Kakade ngenyanga yesithathu yokuphila umntwana angakwazi:
khombisa ukubonakaliswa kokuqala kwenkumbulo;
linda isikhathi sokudla;
ukuhlukanisa imisindo yengxoxo evela kwezinye izandi;
Yeka ukuncelisa isifuba noma ingono, uma ulalela okuthile okuthakazelisayo;
ukutadisha ubuso bakho, amehlo nomlomo ngosizo lwezici.
Ukuthuthukiswa kwamakhono emoto
Njengoba uyazi, ukuze ingane ikhule ngokugcwele, igcine futhi ifunde umhlaba ozungezile, ukuthuthukiswa kwamakhono emoto kudlala indima enkulu. Ngonyaka wokuqala wokuphila kukhona ukuthuthukiswa okusebenzayo kwesimiso somshukela wengane, ngakho ufunda ukuguqula kusuka emzimbeni kuya emuva futhi ngokuphambene, uhlale, uvuke, uhambe, futhi-ke, ngonyaka wesibili wokuphila, ugijimele futhi ugijime.
Kakade ngenyanga yesithathu yentuthuko yengane, umuntu angabona ukuthuthukiswa okusebenzayo nokuthuthukiswa kwamakhono emoto. Ukunyakaza kokuphathwa kwengane kuhlanganiswa kakhulu, ukunyakaza komlenze kuthuthuka futhi kuthuthukise. Ngakho-ke, umntwana uqinisa isimiso sakhe semisipha ukuze kuzuzwe okunye. Ungakhohlwa mayelana nokuzivocavoca nokusila. Khetha futhi uphelele ubunzima bokuzivocavoca, ingane efanelekayo ngobudala. Ukukhethwa ngokucophelela kanye nokuzivocavoca okuzosiza ukuqinisa isimiso semisipha yengane, kuyosiza ekuthuthukiseni esifubeni sakhe, futhi ngenxa yalokho - kuzokwenza ukuthi inqubo yokuthola usana ikwazi ukuthuthukisa amakhono amasha.
Sekule minyaka yobudala, futhi ngisho nangaphambili kakhulu, kusesesibelethweni, izingane zibonisa isithakazelo ekukhulumisaneni. Yebo, izinyane lezinyanga ezimbili aziqondi ukuthi kusho ukuthini, kodwa kudingeka kakhulu ukuxhumana namalungu omndeni omdala, ikakhulukazi nonina.
Ingane iyaqhubeka ibonisa amakhono akhe okukhuluma. Ngokuvamile, ungabona ukuthi ingane "iphendula" kuwe kuphela emva kokuphela kwenkulumo yakho, njengokungathi ikulalela.
Yini okufanele uyenze nengane enyangeni yesithathu yokuphila? Okokuqala, ukuxhumana. Khuluma nengane ngakho konke, khuluma ukuthi uyamthanda kanjani, yini ocabanga ngayo. Ngaphezu kwalokho, zama ukulingisa ingane, ukukhuluma imisindo ingane yakho ithi. Ngokushesha kuzoba uhlobo lwenkulumompikiswano phakathi kwakho nengane yakho.
Ukuze usize ingane ithuthuke ngokushesha, ochwepheshe batusa "amakilasi" alandelayo:
Thuthukisa amadivayisi we-vestibular baby. Ukuze wenze lokhu, ungagubha ingane ebhokisini elikhulu noma, ulibambe ezandleni zakhe, iningi likwazi ukugubha esihlalweni sokugunda. Ngabeka ingane ngokucophelela emgqeni wakhe, bese uyibeka eceleni, ubambe ngobumnene ebhola phambili-ngakwesobunxele.
Thuthukisa ukuzwela okuthinta ingane. Ukuze wenze lokhu, vumela izinyane liphathe izinto ezenziwe ngezinto ezahlukene. Ochwepheshe bacebisa ukuthenga amathoyizi hhayi kuphela okwenziwe ngefektri, kodwa futhi asetshenziselwa ukuzenzela.
Ukuze uthuthukise umbono wengane kunesidingo ukubeka isibambo sakhe semigundane emnyama nemhlophe, futhi emlenzeni - amasokisi amathrekhi afanayo. Kubonakala ukuthi izingane ezincane zisebenza ngokukhethekile ekuhlukaniseni amathoni amnyama namhlophe. Ukuhambisa imilenze nokuphatha, izinyane lizozihlola, ukuqeqesha, kanjalo, umbono wakhe, futhi zizofunda ukuxhumanisa ukuhamba kwakhe.
Hamba ithoyizi phezu kwesikhala - iselula ejikelezayo. Njalo emva kwezinsuku ezintathu, shintsha amathoyizi ukusekela intshisekelo yengane ukuze ufunde izinto ezintsha futhi uvuselele ucwaningo olusha.
Ngaphezulu kwetafula eliguqukayo noma indawo lapho ushintshe khona izingubo, faka ibhaluni. Uzokwenza izinyane elizungezile likhangele futhi lithakazelise.
Emva kokugeza, ulethe umntwana esibukweni, kumomotheka, uthinte izingxenye zomzimba wakhe bese ubabiza.
Sebenzisa amathoyizi azwakalayo ukukhuthaza usizo lokuzwa kwengane. Mfundise ukuthola indawo yomsindo. Ukuze wenze lokhu, khipha umsindo ngezindlela ezihlukene nakwebanga elide: ngaphambili, ngemuva, phezulu, phansi, kude nakude. Ungasebenzisi ama-rattles akhiqiza umsindo oqinile. Njengomthetho, ithoyizi lekhwalithi lizwakala ngokuthula, hhayi ngokucasula ukuzwa kwengane. Sebenzisa futhi izimbiza zepulasitiki ezigcwele izilimo ezihlukahlukene: i-millet, i-buckwheat, i-peas.
Isikhathi ngasinye ubeka umntwana engengubo noma ngophahla. Ngakho uzovuselela ukuzwela okuthinta ingane kanye nokunakekelwa kwakhe.
Yimaphi amathoyizi ongayithengela ingane?
Amathoyizi, amathoyizi, kodwa kuthiwani ngaphandle kwabo? Ngihlale ngifuna ukuthenga okuthile okusha, okuthakazelisayo nokuwusizo kumntwana. Futhi yini ezoba usizo ezinyangeni ezimbili nantathu?
Imfono izosiza ukugqugquzela ukuhlushwa okubukwayo, nokulandela ukuhamba kwamehlo. Kunconywa ukuthi uyisebenzise kusukela ekuzalweni.
Amabhaluni azosiza ekwakhiweni kwezinto ezibonakalayo zomntwana. Ngokuxhumanisa leli bhola kwisibambiso somntwana, uzosiza ekwakhiweni kwezingxenye zokuhlushwa kwengane yakho.
Umdwebo obonisa ubuso bomuntu . Dweba umfanekiso wesimiso wobuso bomuntu bese uwunamathisela esitokisini kude no-15-20 cm ukusuka kwamehlo omntwana. Izingane ezisencane kakhulu zibonisa isithakazelo esikhulu ekuboniseni umuntu, ngisho nokuhleleka.
Amathoyizi anomsindo "wokugqoka". Amathoyizi anjalo asiza ekuthuthukiseni ukuzwa kwengane. Ekupheleni kwenyanga yesithathu yokuphila, faka amathoyizi anjalo phezu kwesilwane somntwana ngendlela ingane engakwazi ukuyifinyelela ngayo ngezimbambo nemilenze. Ngemva kwesikhashana ingane izoqonda ukuthi, ukuthinta amathoyizi ngemilenze nokuphatha, uyabakha.
Amathoyizi ayenziwe ngezinto ezithambile. Amathoyizi anjalo akhuthaza ekuthuthukiseni ukuzwela okuthinta ingane. Umzwelo wokuthinta izinto ezithambile uhlinzeka ngolwazi mayelana nokuhlukahluka kwezwe elizungezile.
Insimbi. Ukudlala nomntwana, ungasebenzisa insimbi. Bayibeke kancane ebangeni elingama-30 cm ukusuka kwengane, bese uhambisa insimbi engakapheli kwengane. Ukukhala kwethaka elijabulisayo kuzosiza ekuthuthukiseni ikhono lokuzwa lomntwana.
Izindandatho zokhuni. Amathoyizi anjalo akhuthaza ukuthuthukiswa kokubambisana kwengane. Namathisela amathoyizi phezu kwesibhamu endaweni encane engabantwana. Ngosizo lwezindandatho ezinjengalezi, i-crumb ifunda ukuhambisa isundu esivumelwaneni esivumelana nento.
Njengoba sibona, ngenyanga yesithathu yokuphila kwakhe ingane ikhula kakhulu, izinguquko futhi ifeze okuningi. Ukunakwa nothando lwabazali akushiyi ngaphandle kokulandelela, basiza ingane ukuba ithuthukise endaweni ejabulisayo nejabulisayo. Akuyona into eyinhloko?
I-Lullabies yezingane ezisanda kuzalwa
Yini okudingeka ukwazi mayelana nokuncelisa?
Izingubo zezingane ezincane kakhulu
Indlela yokugcoba kahle ingane
I-cheesecake ene-raspberries ne-tshokoledi
Isimo sabantwana ngoFebhuwari 23: ukuthi kuyithakazelisa kanjani futhi kuyinhloko ukugcina iholidi
Uma ingane ingalali kahle izinyanga ezintathu
UMiguel wakhuluma ngokukhululekile ngokuphila kwakhe siqu
Umgogodla wezempilo: isisekelo sempilo
Kungani ngidinga i-bandage yowesifazane okhulelwe?
Ukhohlakala, iso elibi, ukuhlaselwa okubi, ukuxilongwa nokuvikelwa
I-Horoscope ngonyaka wokuzalwa ngo-2017th Firecracker
Ukupheka kwesidlo esivela ku-cottage shizi noma nge-cottage shizi